Shwe Chinthae – ရွှေခြင်္သေ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး – Shwe Bo – Sagaing – Burma – Civil Society Groups – အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ | MoeMaKa Burmese News & Media
>USDP is winning in Mon Sate with Absentee votes
Phone: +959470 60145
Location: Shwe Bo, Sagaing, Burma
Address - No.7Quarter, Shwe Bo, Sagaing, Myanmar
Shwechinthae Social Service Group (SSSG)
HIV/AIDS Care & Support, Blood Donation, Health Education, Capacity Building for Monastic Education and make effort to form social service groups in rural area around Shwebo Township, Sagaing Division, Myanmar.
SSSG is to stands up an social welfare service organization which works for health education, care and support and educational services.
Phone +959470 60145
ရွှေခြင်္သေ့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ Shwechinthae Social Service Group (SSSG) သည် ၂ဝဝဝ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စာကြည့်တိုက်နှင့် ပညာဒါနသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ HIV/AIDS ပညာပေးနှင့် ကုသစောင့်ရှောက် ပြုစုထောက်ပံ့ရေးများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ HIV ပိုး၊ B ပိုး၊ C ပိုးများ စစ်ဆေးပြီး သန့်စင်သွေးအလှူရှင်များ စုဆောင်းလှူဒါန်းပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နေရာက ရွှေခြင်္သေ့ ကလေးစံဌာနေဖွင့်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်။
ရွှေဘိုမြို့၊ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်က အစိုးရမူလတန်းကျောင်း၊ မိဘမဲ့ကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအနီးတွင် ကျူးကျော်အဖြစ်နှင့် မြို့တွင်းမှ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသော ကွက်သစ်တကွက်ရှိပြီး ယင်းကွက်သစ်တွင် ပလတ်စတကောက်သည့် လုပ်ငန်း၊ တောင်းစားသည့် လုပ်ငန်း၊ အလှူခံလိုက်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးကြသူအချို့လည်း နေထိုင်ကြပါသည်။
This Ad has been viewed 30345 times.